Ndị na -emepụta ngwaahịa - China Products Factory & Suppliers
Ike ịchekwa ume na ịrụ ọrụ nke ọma hama DTH
Mgbanwe nke ọnụahịa DTH na -eji maka mgbawa oghere mkpọpu ala na ọgbụgba ọkụ, tumadi etinyere na Ngwuputa,
Nkume marble ma ọ bụ olulu mmiri na ọrụ ihe owuwu ndị ọzọ.
Ọnụahịa ntụaka FOB: Nweta ọnụ ahịa kacha ọhụrụ
Nọmba Model: 28mm
Mmiri ịgbado ọkụ mmiri na -egwu Diamond Core Drill Bits Maka Drilling Hard Concrete/Asphalit
Ọnụ Ahịa FOB: Nweta ọnụ ahịa kacha ọhụrụNọmba nlereanya: Isi mkpọpu ala
PDC egbutusị 3 ịdọrọ malite ịgba bit maka mmiri ọma egwu ala coal
Nọmba nlereanya: 4-1/2 ”TCI tricone drill bit
A na -ekekarị ihe nrụpụta ihe, ụdị ngwa ọrụ eji arụ ọrụ na -egwu ala, n'ụdị abụọ: onye na -emetụta pneumatic na onye na -emetụta hydraulic.
Compressor ikuku bụ ụdị akụrụngwa ejiri mpikota gas. Ọdịdị nke ikuku Compressor yiri nke mgbapụta mmiri. Imirikiti ndị na -eme ikuku bụ ụdị nkwụnye na -agbanwegharị, agụba na -agbagharị ma ọ bụ kposara na -atụgharị. Compressors nke centrifugal bụ ngwa buru ibu.
Ọkụ anyị na-arụpụta onwe ya mepere emepe na-eme ka arụmọrụ mkpọtụ na ọsọ dị mma site n'ịbelata mfu mmiri. Dayameta dị n'ime nke na-akpasu iwe na njedebe nke ngwa ọrụ bụ otu ihe ahụ dị ka dayameta dị n'ime nke ọkpọ ọkpọ, na-ebelata mbelata site na 20%-50%. Ịchapu ihe dị n'ime ahụ na -ebelata corrosion ma na -eme ka ike gwụ ike, na -eme ka nlele na -aga n'ihu na mkpọpu eriri waya.
Pipe nke na-egwu olulu mmiri bụ ngwaahịa ka mma nke paịpụ olulu. Ọnụ ya abụọ nwere isi nwoke nwere ezigbo njiko, nke a na -eji mkpọchi mkpọchi. Mgbe ịrapagidesi ike, na -amịpụta, na -agbasawanye na dayameta dayameta na -eme, ọ dịghị mkpa iji dochie ọkpọkọ mgbagharị n'ozuzu ya, na isi nwere ike ịchekwa mkpọpu ala. Ọnụahịa Anyị nwere ike nye ọrụ OEM ma ọ bụ ODM, anyị nwekwara ike hazie mkpara dị ka ihe achọrọ, ogologo, ọkpụrụkpụ mgbidi na eri.